सकियो देउवा र प्रचण्डबीचको भेटवार्ता, के भयो कुराकानी ?
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीचको भेटवार्ता सकिएको छ। देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा भएको भेटवार्ता भर्खरै सकिएको हो।
उनीहरूबीच नयाँ सरकार गठनका विषयमा छलफल भएको हो। राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाभित्र बहुमतको सरकार गठनका लागि दलहरुको दौडधुप जारी रहेका बेला दुई पार्टीका प्रमुखबीच भेटवार्ता भएको हो। भेटमा कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का पनि रहेको बताइएको छ।
संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा दलको समर्थनमा सरकार गठन गर्न तम्सिएका देउवा र दाहाल बहुमत नपुग्ने भएपछि निराश भएको बताइएको छ। कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘हामीले कोसिस गरिरहेकै छौं। तर बहमुत पुग्ने अवस्थामा देखिएको छैन। यस्तो अवस्थामा कसरी दाबी गर्नु? अझै छलफलमै छौं, ठेगान छैन।।’
सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत गुमाएसँग राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि तीन दिनको समय दिएको थियो। यो समय घर्कनै लाग्दा नयाँ सरकार गठनमा दाबी गरेको कांग्रेसले बहुमत जुटाउन सकेको छैन। विपक्षी दल नेपाल पक्षको निर्णयको पर्खाईमा छन्।
नेपाल समूहले पार्टीको विषयमा राखिएको अडान पुरा गर्न चार बजेसम्म ओलीलाई अल्टिमेटम दिएको छ। अल्टिमेटम दिएसँगै ओली र नेपाल हात्ती गौंडमा छलफलमा जुटेका छन्। यता जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले पनि देउवाको प्रस्ताव अस्विकार गरेको बताइएको छ।
कति जिल्लामा काँग्रेसको समायोजन बाँकी छ ?
काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक आज पनि
नेपाली काङ्ग्रेसकाे स्थानिय तहकाे महाधिवेशन साउन १२ गतेबाट शुरु